musha nyika dzakabatana Vatyairi veNASCAR Denny Hamlin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Iyo Biography yaDenny Hamlin inokupa chokwadi nezvenyaya yehudiki hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Mary Lou Clark naDennis Hamlin), Hupenyu hweMhuri uye Vanin'ina (Kevin naLisa). Moreso, Mararamiro aDenny Hamlin, Hupenyu hweMunhu uye Networth.
Nyaya Yakareba Pfupi, tinopa ongororo yakadzama yehupenyu memoir yemutyairi wemujaho wekuAmerica uyo akazadzisa chiroto chake. Kubva pamazuva ake ekuzvarwa kusvika kune zita repamba munjanji.
Kuti uwedzere kushuvira kwako kunonakidza hunhu hweDenny Hamlin's Biography, isu takagadzirira Hupenyu hwake hwepakutanga uye Rise Garari. Nyatsocherechedza pfupiso yeNhoroondo yeHupenyu yemujaho wenyeredzi pazasi.
Dennis Hamlin's Biography- Tarisa Hupenyu hwake hwepakutanga uye Nyaya Yekubudirira.
Kunyangwe kurumbidzwa kwemutyairi weNASCAR, vashoma chete mota- vanoda zvemitambo vanoziva Denny Hamlin's Biography. Nokudaro, tinokugadzirira chinyorwa ichi. Pasina imwe ado, ngatinyure mukati.
Denny Hamlin Nyaya Yehudiki:
Kune vanotanga Biography, mutambi ane zita rakazara "James Dennis Alan Hamlin." Denny Hamlin akaberekwa musi we 18th waNovember 1980 kuna amai vake, Mary Lou Clark nababa vake, Dennis Hamlin, muFlorida City, United States.
Denny Hamlin ndiye gotwe revana vatatu vakakomborerwa muwanano yevabereki vake. Pazasi pane mufananidzo wemhuri wababa vake (Dennis), amai vake (Mary Lou), uye mudiki Denny.
Mufananidzo weMhuri waMary Lou Clark, Dennis Hamlin naDenny Hamlin.
Denny Hamlin akaberekerwa muTampa paSt. Joseph's Women Hospital. Iye anoshuvira mujaho akakura nevanin'ina vake, Kevin naLisa Hamlin. Uye achiri muduku, mhuri yake yakatamira kuVirginia, United States.
Mufananidzo Usingawanzo waDenny Hamlin Pamwe Naamai vake, Mary Clark Hamlin.
Kubva paudiki, kunyanya kubva pazera re3, Denny aigona kutoziva vatyairi veNASCAR. Muchidimbu, motokari dzinomhanya dzakafadza mwana. Panguva iyoyo, baba vake (Dennis Hamlin) vaiziva kuti mweya wekumhanya waiva mumwanakomana wavo.
Denny Hamlin Mhuri Background:
Kuve chikamu chemakwikwi emujaho wemota hakuuyi zvakachipa. Muchokwadi, zvinoda mari yakawanda. Mari idzi dzakavapo, Dennis Hamlin achishanda semaneja webasa.
n 1996, baba vaDenny Hamlin vakavhura Chesterfield Trailer yavo uye Hitch shopu. Uko mukomana wechidiki nababa vake vanogadzira uye vanotengesa turera. Nepo Mary Lou Clark, amai vake, vaive mubereki wenguva yakazara-pamba.
Mukufamba kwenguva, simba rezvemari remhuri yaDenny Hamlin rakanga risina kugadzikana. Vakanga vasiri mhuri yakapfuma. Somuuyo, vakashandisa zvipi nezvipi zvavaigona kuwana kuti vawane zvinodikanwa zvinokosha.
Denny Hamlin Mhuri Mavambo:
Zvino, nezve madzitateguru emhuri yake, Denny Hamlin muAmerica nerudzi. The ramangwana motokari mujaho akaberekerwa mutaundi muFlorida rinonzi Tampa.
Tampa iri kumadokero kwemahombekombe mudunhu reFlorida uye inozivikanwa nekukwezva kwayo vashanyi. Mazhinji enzvimbo dzayo dzekushanya iBusch Gardens uye museum yezvirimwa, nezvimwe, inoratidzwa pazasi.
Mamwe eTourist Attraction Center ari muTampa, Denny Hamilton's Birthplace.
Zvakare, musha weTampa wakawana zita rawo kubva mumutauro weCalusa mutsara wekuti "Firesticks". Nekuti vanogara vachisangana nemabhanan’ana akanyanya. Nokudaro, vagari vayo vakaitumidza 'Lighting Alley'.
Chekupedzisira, zita rekuti "Hamlin," rinobva kuIrish neChirungu, zvinoreva "Kumba." Nezvese izvi, tinogona kugumisa kuti mutambi wedu wekuAmerica ndewerudzi rwevachena. Inotevera mepu yemifananidzo yemidzi yaDenny Hamlin.
Mufananidzo unomiririra weDenny Hamlin's Ancestry.
Denny Hamlin Dzidzo:
Apo Wechidiki Denny Hamlin aive wezera rechikoro, vabereki vake (Dennis Hamlin naMary Clark Lou) vakamunyoresa kuManchester High School, Florida. Zvisinei nerudo rwaDenny Hamlin rwemujaho, hazvina kukanganisa kuita kwake mudzidzo.
Pane kudaro, chido chaDenny Hamlin chakanga chakajeka kuvadzidzisi vake. Nekuda kweizvozvo, vaigara vachimupa rondedzero dzemijaho. Pazasi pane basa raakanyora nezve chishuwo chekuhwina Daytona 500 paaiva nemakore manomwe.
Denny Hamlin's Essay Nezve Chishuvo chake chekuhwina Daytona 500 Race.
Denny Hamlin Mota Mujaho Nyaya - Kubva Pamazuva Ekutanga:
Zvinyorwa zvinoratidza kuti kubva pazera rechinomwe, mutambi atotanga basa rake, mujaho go-Karts. Mukombe wakaita sechimiro mujaho remujaho unoratidza kuti Denny Hamlin akahwina mibairo kubva pazera diki.
Denny Hamlin aive Mwana ane makore manomwe mujaho rake rekutanga kuenda-Karting.
Zvakare, mujaho rake rekutanga rekuyaruka, Denny Hamlin akaita kuti mhuri yake idade. Izvi zvakaitika nekuti akahwina mujaho wake wekutanga wemotokari kuLangley Speedway. Mufaro waive pachiso chaDenny unoratidza mufaro wakanyanyisa apo anenge achiratidzira nemubairo wake.
Iye Aspiring Auto Sports Legend Denny Hamlin, Achimira Ne Trophy yake muMujaho wake Wokutanga Modhi yemota.
Pamusoro pezvo, mujaho wemota akakwikwidza muGrand Stock division muna 1998. Uye akatanga kutyaira Model Stock Cars muna 2000. Denny Hamlin, achifamba kubva kugo-kart kuenda kumota dzemhando, chimwe chinhu chekudada nacho.
Pakazosvika gore ra2004, mutambi wemitambo yemotokari akawana rekodhi yekuhwina makumi maviri neshanu nemapango makumi matatu kubva mumijaho yake makumi matatu nematanhatu. Mwedzi yakati gare gare, Denny Hamlin akasainwa kuna Joe Gibbs Racing. Pakupedzisira, kujoinha timu yeNASCAR.
Denny Hamlin Yekutanga Kusaina Kondirakiti NaJoe Gibbs.
Denny Hamlin Biography- Rwendo rweKukurumbira Nyaya:
Iyo Nascar Racing Nyaya:
Mwaka uno, Denny Hamlin akaita debut yake nechinzvimbo chechigumi mu5 NASCAR Craftsman Truck Competition yakaitirwa muIndianapolis Park. Mutyairi wemujaho ari kukura akakwikwidzawo muDarlington Raceway achipera ari pachinhanho chechitatu.
Kupfuurirazve muna 2005, mutyairi wemotokari akamhanya yake yekutanga NASCAR Cup Series neNo. 11 yake FedEx Chevrolet semutambi. Denny Hamlin akava Rookie wekutanga kutora kukunda. Kunze kwekuhwina mijaho yakapetwa kaviri munzvimbo nhatu dzepamusoro.
The Rookie, Denny Hamlin Achipemberera Nekuhwina kwake Kwekutanga NeVashandi Vake.
Mujaho wakatevera waive muDaytona 500 yaitarisirwa zvakanyanya. Denny Hamlin akange atoisa rekodhi kune vanoda kumujaho kuti vapfuure. Pakupedzisira, ari munzira yekuve mutyairi wemujaho wemasheya.
The Tripple Daytona Kukunda:
Denny Hamlin akatanga mwaka unotevera mumujaho wake mutsva muDaytona 500, achipera nechinzvimbo chechimakumi maviri nemasere. Uyezve, akatora chikamu muPepsi 28 paDaytona Speedway uye akawana nzvimbo yake yekutanga-400rd nokuti motokari yake yakaputsika.
Pakupedzisira, mu2016, akahwina yake yekutanga Daytona 500, achirova Martin TrueX nemasekonzi 0.10. Kupfuurirazve, muna 2019 na2020, Denny Hamlin akahwinawo wake wechipiri uye yechitatu Daytona mushure mekuparara kwetambo.
Mufananidzo Collage yaDenny Hamlin Achipembera Nevashandi vake seDaytona 500 Muhwina Kwematatu Akatevedzana.
Pakupedzisira, Denny Hamlin akabatana neNASCAR Hall of Fame. Rukudzo rwunopihwa kune vatyairi vemotokari vane 3 Daytona kuhwina. Tinogona kuona mota yake yeNhamba gumi neimwe uye mukombe uri pamufananidzo pazasi.
Denny Hamlin's Legendary Number 11 mota uye Yetatu Daytona Trophy muNASCAR HALL OF FAME.
Denny Hamlin Bio- Kubudirira Nyaya:
The Daytona 500 Triple Winner akawedzera mumwe munhenga pakepisi yake. MunaGunyana 2021, Denny Hamlin anomhanya mumwe mujaho, Kyle Miyata Larson, mumujaho wekubika. Saka, kutora nzvimbo yekutanga uye muhwina wemaodzanyemba 500 mibairo.
Iye 2021 Muhwina weSouthern 500, Denny Hamlin.
Pamusoro pe, Denny Hamlin naMichael Jordan vanobatana kuti vagadzire timu nyowani yeNASCAR, naBubba Wallace somutyairi. Kune nyanzvi yemujaho, chiroto kuzadzikiswa kuve pamwe chete neNBA Basketball mutambi '.Mweya Wake'.
Mukupedzisa, mukomana ane makore manomwe anoshuvira ave mujaho weAmerican motorsports uye akahwina katatu Daytona 500. Sezvineiwo, Denny Hamlin akazadza bhokisi rake rekuratidzira nemikombe. Zvimwe zvacho, vanoti inhoroondo.
Denny Hamlin Akaroora here? -Kubvunza nezve Mukadzi wake, Vana
Chinhu chekutanga kuyeuka ndechekuti mutyairi weNascar nyanzvi haana kumbobvira aroora. Zvakadaro, hazvitadzise Denny Hamlin kubva murudo. Uye mukutsvaga kwake uye kukunda kwekunzwana, anosangana neJoridhani Hove.
Sangana naJordan Hove, Musikana waDenny Hamlin.
Musikana waDenny Hamlin akaberekwa musi we 27th waOctober 1987 muSouth Carolina, United States. Jordan Hove ndiye mwanasikana mudiki wemhuri yake, aine hanzvadzi, Linsey Fish. Zvakare, iyo inoyevedza Wag ndeye alumnus yeEast Carolina University.
Mawaniro Akaita Hove yeJordani naDenny Hamlin:
Vaviri vacho vakaita musangano wavo wekutanga paCharlotte Bobcats game muna 2007. Maererano naJordan Fish naDenny Hamlin, vakadanana pavakatanga kuona. Nekudaro, tinobvumirana navo nekuda kwekunaka kwavakaita kwemakore gumi nemana.
Nguva Dzakanaka Dzakanaka dzeShiri dzerudo, Kubva Mudiwa Wavo Wekutanga Kusvikira Nhasi.
Pasinei nechisungo chakasimba chavanogovana. Pasocial media, Jordan Hove akagovera zvinyorwa zvinoshungurudza zvekurambana pasocial media. Pane, zvisinei, hapana humbowo hwekuparadzana kubva kumapato ese ari maviri.
Mufananidzo weHinted Breakup Text, Hove yeJordani Yakakwidzwa paSocial Media.
Vana vaDenny Hamlin:
Vose vane vasikana vaviri kubva muukama hwavo. Mwana mukuru ndiTaylor James Hamlin. Jordan Hove akazivisa nhumbu yake nepikicha pasocial media. Uye pakupedzisira akabereka musi wa20 Ndira 2013.
Hupenyu Hwendo hwaTaylor James Hamlin Mwanasikana wekutanga waDenny Hamlin.
Vabereki vanozvikudza (Jordan Fish naDenny Hamlin) vaiva nemwana wavo wechipiri, Molly Gold Hamlin, musi we 15th waAugust 2017. Kunyange zvazvo akauya mazuva mashanu zvisati zvatarisirwa, mhuri yake yakafara. Panguva yekunyora, Molly ane zera 4.
Baba Vanodada Nascar Vanomira NeMwanasikana wavo Wechipiri Mudiki Molly Goridhe.
Hupenyu hwemutyairi wemujaho anogara achimhanya kubva padanda kuenda padanda uye anogara ari munzira. Mumwe angafunga kuti Denny Hamlin haazopedza nguva nevana vake. Kusiyana neizvi, mujaho weFedex anogara achichengetera vasikana vake nguva.
The Auto Racer, Denny Hamlin, Kuita Baba Vake Mabasa NeVasikana Vake.
Denny Hamlin Hupenyu hweMunhu:
Isu tiri kunyatsofarira izvo zvinoitwa nemujaho wemotokari Denny Hamlin kunze kwematayi. Zvinoshamisa, ari mune mumwe mutambo kunze kwemujaho wemota.
Denny Hamlin's Hobby:
Kyle Larson, Hunter Stenson naDenny Hamlin vanotamba mutambo wegorofu nguva nenguva kudzikamisa tsandanyama dzavo kubva pamujaho. Vanogona kunge vasiri nyanzvi, asi ivo vari pakati peakanakisa Nascar gorofu.
Vatatu ava vanotora zvidzidzo zvegorofu kubva kuna Harold Varner, anove mutambi wegorofu wekuAmerica. Chinotevera vhidhiyo yekutamba kwaDenny Hamlin panhandare yegorofu. Sezvakangoita mumanjanji, anotamba gorofu aine shungu kwazvo.
Denny Hamlin Mararamiro:
Nyika yemujaho inokwanisa kuwana chero mararamiro anoshuvira kutorwa nemuAmerica Denny Hamlin. Uye mujaho anoishandisa kutanga kumba kwake kwaanogara pazasi:
Iyo Exotic uye Yakanakisa Imba yeMobile Winning Racer, Denny Hamlin.
Iyo 30,000 sq ft mansion inogara yakanaka pamucheto weLake Norman, North Carolina. Imba yaDenny Hamlin ine tekinoroji yazvino - Elan Control System uye mamwe maficha anodonhedza shaya:
Nzira mbiri dze bowling.
Mutambo wegorofu uye mujaho simulator
Garaji regonhi regirazi rinoratidza mota yake.
Zvese izvi hazviuye zvakachipa, zvichidhura $26 miriyoni seyeukoshi hwayo hwazvino. Imba yaDenny Hamlin yekudzokera kwairi mushure mekuoma kwezuva kuridza matayi nemakwara ekumhanya.
Nhoroondo yeDenny Hamlin - Networth:
Mutyairi weNascar ane zvibvumirano nemakambani akasiyana. Pamusoro pekuhwina kubva kubasa rake remujaho. Pamwe chete, zvakaita kuti mukwikwidzi wemitambo ave wechitatu akabhadharwa zvakanyanya nhare mujaho muna 2019 na2020.
Zvinoenderana ne2021 stats, Denny Hamlin ane mambure anokosha emadhora makumi matanhatu neshanu.
Denny Hamlin Hupenyu hweMhuri:
Nhengo dzeMhuri yaDenny Hamlin muKuungana.
Mhuri yega yega chikamu chidiki pakubudirira kwemunhu — mhuri yedu inogona kuve nekuzvarwa kana sarudzo. Chero zvazvingava, Vanofanira kubatwa zvine chiremerera.
Tichifunga nezvemashoko ari pamusoro apa, mhuri yaDenny Hamlin inogadza muenzaniso wekuisa zvinhu zvavo zvose muchiroto chemwanakomana wavo. Somugumisiro, nyaya yake yaizova isina kukwana pasina ivo.
Zvimwe pamusoro paBaba vaDenny Hamlin:
Dennis Hamlin aiva murume anoshingaira uye baba vane hanya kuvana vavo. Kusiyana nemutambi webasketball Baba vaBam Adebayo. Baba vaDenny Hamlin havana kumbosiya Denny chero chikamu chehupenyu hwake.
Denny Hamlin naBaba vake Dennis Hamlin, Vakagara nemwanasikana wavo, Molly Gold.
Nhamba 11 baba vatyairi veFedEx vakachengeta mhuri yavo. Uye mukutenda, Denny Hamlin akamugadzirira nzira yekuenda pamudyandigere. Muchidimbu, anoita kuti baba vake (Dennis Hamlin) vasamboshaikwa.
Zvimwe pamusoro paAmai vaDenny Hamlin:
Apo Mary Clark Lou anogovera mufananidzo nemwanakomana wake uye mukombe wake. Pfungwa dzake nemoyo wake zvinozara nekudada kwaDenny Hamlin.
Amai Vanodada, Mary Clark Lou, Kugovera Mukukunda kweMwanakomana wavo.
Pakutanga, aifanira kutengesa mota yake yaanofarira yemitambo kuti aise mari yemwanakomana wake. Kunyangwe hazvo Mary Clark ari muvaki wemba, akaita chokwadi chekuti Denny Hamlin atora zvidzidzo zvekugadzirisa mota, izvo zvakazobatsira mubasa rake remujaho.
Zvimwe Nezve Vana vaDenny Hamlin:
Mujaho weStock aive nevakoma vatatu vakuru. Imwe hama inonzi Kevin Hamlin nehanzvadzi yehafu inozivikanwa saKim. Pazasi pane mufananidzo wehanzvadzi yaDenny Hamlin, Lisa.
Sangana naLisa Hamlin, Munin'ina waDenny.
Nekudaro, mushure mekuita tsvakiridzo yakanyatso maererano nevanin'ina vaDenny Hamlin. Nehurombo, isu hatina rumwe ruzivo nezve Kevin, Lisa, naKim Hamlin.
Pamusoro pehama yaDenny Hamlin:
Ambuya vekuAmerica ndiThelma Clark. Kunyange zvazvo tine zvishoma pamusoro paamai vaMary Lou, muzukuru wake (Denny Hamlin) akamurondedzera semunhu ane rudo. Nehurombo, akafa muna 2019.
Denny Hamlin Untold Chokwadi:
Kupfupisa biography yaDennis Hamlin, isu tinopa zvimwe zvisinga taurike chokwadi chemujaho wemasheya.
Chokwadi #1 - Carbon Monoxide Poison:
Mune imwe nhangemutange, Denny Hamlin akarwara nehutsi hwecarbon monoxide panguva yemujaho weNASCAR muna 2019. Kuti atsanangure zviri nani, akapotsa apera sekudhumhana kwakatsemura hunde yemotokari ndokupinza utsi hwegasi.
Chokwadi #2 - Charity Works:
Iwe unogona kunge usingazive nezve Denny Hamlin Foundation. Iyo ine nzvimbo yayo chaiyo muRichmond, United States.
Iyo Denny Hamlin Foundation.
Nheyo iyi yakazvipira kuunganidza mari yevana vane zvinodiwa zvakasiyana. Zvakadai se cystic fibrosis, kuoma mitezo uye zvimwe zvakakomba zvisingaperi zvirwere. Denny Hamlin anopawo chikafu nezvimwe zvinhu zvevana vanorwara.
Mupiro Wakagadzirwa naDenny Hamlin Pamwe Chete neFedEx.
Chokwadi #3 - Chitendero chaDenny Hamlin:
Muhwina weTripple Daytona 500 inhengo yeElevation Church. Denny Hamlin, akasangana netsaona dzekufa, anogara achitenda Mwari nekuda kwehupenyu hwake.
Nekudaro, mujaho wemotokari haambotadzi kuenda kushumiro uye mamwe mabiko. Unotevera mufananidzo wezviitiko zvemhuri yaDenny Hamlin muchechi.
Imba yaDenny Hamlin mune Mamwe Mushure meChechi Mifananidzo.
Tafura iyi nhoroondo yakarurama yaDenny Hamlin. Muchidimbu, inopa ruzivo kuti unzwisise Bio yake.
DENNY HAMLIN WIKI MIBVUNZO
Zita rizere: James Dennis Alan Hamlin
Zita rekudanwa: Denny hamlin
Zuva rekuzvarwa: 18th yaNovember 1980
Basa: Stock Race Driver
Nzvimbo yekuzvarirwa: Florida, nyika dzakabatana
Baba: Dennis Hamlin
Amai: Mary Clark Hamlin
Hanzvadzi konama: David Hamlin
Hanzvadzi sikana: Lisa Hamlin
Musikana: Hove dzeJorodhani
Vana: Taylor James Hamlin
NetWorth: $65 Mamirioni (2021 Stats)
Kureba mu Tsoka: 6 Tsoka 1 Inches
Mhuri yaDenny Hamlin yakamupa pfudzi nesimba kuti atsamire paari. Baba vake, Dennis naamai, Mary Clark, ndivo vabereki vakakodzera kumwana wese. Zvirokwazvo, zvibayiro zvavakapa zviri mumwoyo make nokusingaperi.
Kunongedza, matambudziko avaisangana nawo aive asiri chinhu nekuti imba yaDennis Hamlin yaive neramangwana mupfungwa. Saka, ramangwana redu harizi chinhu kana richienzaniswa neangava ekutanga.
PaChildhood Biography, tinopa ruzivo rwakapfupika uye rwechokwadi rweAmerican Stock Race Drivers. Panguva imwecheteyo, usakanganwa kugovera pfungwa dzako nezveDenny Hamlin's Biography kuburikidza nechikamu chekutaura.